श्वास थोरै कसरी लेख्ने? सासको कमी भनेको के हो? यसको कसरी मतलब छ? Tdk - How Writing.Info
श्वास थोरै कसरी लेख्ने
विशेष गरी लिखित परीक्षा र केन्द्रीय प्रणाली परीक्षाको शब्द भागहरूमा, सामान्यतया १-२ प्रश्नहरू गलत हिज्जेसँग सम्बन्धित छ। हिज्जे त्रुटिहरू अनुच्छेद वा परिसरमा समावेश छन्, र यी प्रश्नहरूको उत्तर बनाइएको छ वा छैन अनुरोध गरिएको छ। हाम्रो nasilyazilir.info साइट तपाईंलाई मद्दतको लागि डिजाइन गरिएको हो। जब तपाइँ चाहानुहुन्छ, तपाइँ सही हिज्जे नियममा पुग्न सक्नुहुनेछ र त्यो शब्द एक वाक्यमा कसरी प्रयोग भएको छ भन्ने बारे जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाइँ आफ्ना प्रश्नहरू देख्न सक्नुहुन्छ जस्तै भेदभाव, छेउछाउ वा यो वाक्यमा कसरी प्रयोग भएको छ, र गलत शब्दहरूलाई सच्याउनुहोस्।
सास फेर्नको अर्थ के हो?
श्वास थोरै कसरी लेख्ने?
एरोज गरिएको हेजहोग
बचत गर्न सक्षम हुनुहोस्
Yenik, -ği (ट्रेस)
ट्याप गर्न सक्षम हुनुहोस्